Kumiswe inkonsathi ye-Avante | isiZulu
Kumiswe inkonsathi ye-Avante
I-Avante izobonga abalandeli
Durban - Ihoxisiwe isigubhukane ikhonsathi ebizoba ngoNovemba 24 KwaMashu Christian Centre yokugubha iminyaka engu-20 iqembu lomculo wokholo labesilisa i-Avante langena emculweni.
Isolezwe lihabule ukuthi ukuhlehliswa kwale khonsathi kudalwe wukungaboni ngaso linye phakathi kobeyimenenja yeqembu uXolani Majozi ongumnikazi weXolani Majozi Entertainment namalungu eqembu oLinda Gcwensa, James Langa noLucky Cele.
Igoda lokusebenzisana phakathi kweqembu noXolani ligqabuke ngeledlule, ngokusho kwakhe uXolani.
UXolani utshele leli phephandaba ukuthi izingqinamba ezenze ukuthi le khonsathi abeyihlelile ingabe isaqhubeka bezingeke zisagwemeka nokwenze ukuthi “athathe isinqumo esinzima” sokuyihoxisa.
“Ukubambisana esasinakho ngesikhathi siqala ukusebenzisana ngo-2010 bekungasafani manje, lokho obekwenza umsebenzi wami ube nzima kakhulu. Isikhathi esiningi besihlale siphikisana, ngabe sengibona ukuthi imiqondo yethu ayicabangi ngokufana, izinto eziningi asivumelani ngazo. Lokhu kuze kwangiphoqa ukuthi ngingabe ngisaqhubeka nekhonsathi, cabanga bese ngihlele kangaka,” kusho uXolani.
Ilungu laleli qembu, uLinda, lithe belingakayizwa indaba yokuthi abasasebenzisani noMajozi.
“Ngokwazi kwami usengumphathi wethu futhi nguye osibikele ukuthi ikhonsathi uzoyihoxisa. Ukuhoxiswa kwayo bekwenza umqondo kithi njengoba bese kusele amasonto amabili ukuthi ibe khona kodwa besingakaze sibe nesikhathi sokuzilungiselela."